Stick - Sylph Zviratidzo Zviratidzo & Zvinorehwa | Chiroto Duramazwi - Chiroto Duramazwi
Dudziro Dudziro Zvinoreva
Tsvimbo - Sylph Zviroto Zviratidzo & Zvinorehwa
ZVIROTO: TO B C D IS F G H Ini J TO L M N KANA P Mubvunzo R S T U V IN X Y NE
S - Kunyengedza
Mbeu - Chando
Soda - Simbi
Tsvimbo - Sylph
( ona Miti, Matanda, Wand )
Zvichienderana nesaizi yayo uye chimiro, ichi chinogona kuve chiratidzo chehutungamiriri (semuenzaniso, 'taura zvinyoro nyoro uye takura tsvimbo huru').
Freudian: Imwe chiratidzo chechipenga.
Mharidzo yekufananidzira kuti ubate uye umire kuve 'tsvimbo-mune-iyo-iyo-matope.'
Rudzi rwehuni, chimiro chayo, uye mashandisirwo ayo kana kuoneswa muchiroto zvinowedzera kukutsanangurira uyu mufananidzo. Semuenzaniso, chidimbu chehazel huni chine mugumo weforogo chingangomiririra matarenda ekuuka ekuvandudza kana kugona kunzwira tsitsi mamiriro ezvinhu ( ona Kushopera ), sezvo huni iyi yaiwanzoshandiswa pakuroya kwemvura.
( ona Kukamhina, Chiveve, Kuoma mitezo )
Kurota kwakasarudzika kunouya kubva mukurara munzvimbo isina kugadzikana.
Kuzvitutumadza, kuomarara, uye kusagadzikana maitiro anoratidzirwa newe kana nevamwe.
Nekuti kuomarara kunotadzisa kugona kwako kufamba, iyi inogona kunge iri imwe nzira yezvipingamupinyi zviroto.
Stock Market Kurota
( ona Bhengi / Kubhengi, Mari )
Zvinhu zvaunovimba nazvo, asi izvo zvingangodaro zvisina kuchengetedzeka.
Kunyatso kuongorora ako zviwanikwa uye zviwanikwa (semuenzaniso, 'kutora stock').
Kana misika yemasheya ikapunzika, izvi zvinomiririra kuti rugi ibviswe kubva pasi pezvaunotarisira uye zviroto kusvika pakushaya tariro.
Kana mamwe masheya akaonekwa muhope dzako, funga mazita avo kana zvipfupiso zvekumwe kukosha kwekufananidzira. Semuenzaniso, kambani ine zita rakadai seEnharaunda Dhizaini inogona kuenzana nekuda kuita shanduko munzvimbo dzaunogara, kunyanya idzo dzinozove dzine hutano.
( ona Makristasi, Kuchera, Matombo Anokosha, Zvishongo, Changu, Zvicherwa )
Dzidza zvese nezve kuporesa uye metaphysical zvimiro zvemakristaro , matombo nematombo anokosha.
Zviroto pamusoro pematombo zviri pakati pezviroto zvine zvazvinoreva uye zvinofananidzirwa nenzira yekuti zvinomiririra munhu wepakati; musimboti wekuva kwako.
Kuva nemoyo wakaomarara kana kuva neibwe.
Nzvimbo yekutangira; kutanga nenheyo. Zvitendero zvekare zvaipokana kuti vanhu vakazvarwa nematombo, chinova chimwe chezvikonzero nei mabwe akaumbwa zvakasiyana kana avo vane mamaki asina kujairika vainamatwa samwarikadzi.
Kutenderera Dombo Kurota: Nekuunganidza hapana moss, dombo (rinomiririra iro pachako) rinoramba richifambira mberi munzira yaro. Yambiro pano haisi kufamba nekukurumidza zvekuti zvidzidzo zvakakosha zvinosiiwa munzira.
Kumira Dombo Doto: Zvinoratidza kunamatwa kwechisikigo uye zvitendero zvepasi. Izvi zvinogona kuratidza kufarira mune zvakafanana, kana kuda kuswedera padyo nenyika. Izvi zvinogona zvakare kuva imwe denderedzwa, muchinjikwa, kana chiratidzo chevhiri, zvinoenderana nekugadziriswa kwematombo.
Matombo akasungirirwa akaumbwa kubva mumvura anoonekwa seanopinza rombo rakanaka. Saizvozvowo, matombo madiki anonzi saivo muFinland akatakurwa sematare, achiunganidzwa kubva mudunhu rimwe chete nematombo akamira.
Kukanda Matombo Kurota: Kukanda aspersions anogona kana angave asiri echokwadi. Kuisa mhosva kune vamwe asi usingaone zvaunokanganisa.
Birthstone Kurota: Kurota rako pachako dombo rekuzvarwa rakanyanya serendipitous.
Boulder Kurota: Rumwe rudzi rwezvipingamupinyi zviroto, kwaunotenderera nyaya iyi haisiyo mhinduro. Iwe unofanirwa kutsvaga nzira yekujekesa iyi nzira, kana kupfuura pamusoro pebwe pane kunzvenga nyaya. Neimwe nzira, dombo rinogona kuvhara nzira yako nechikonzero chakanaka, senge imwe yakaenzana pamucheto wegomba rakadzika.
Geode Kurota: Pfuma yakavanzwa. Usagare uchitonga bhuku nebutiro raro roga-tarisa kumberi kupfuura ivo vepamusoro mune ino mamiriro. Iko kuedza kuchaburitsa hupfumi husinga batike hwehupenyu, zvese izvo zvakakodzera nguva yako.
Zvisaririra Kurota: Dzidziso yekushanduka-shanduka inotaura matiri, vamwe, kana mamiriro ezvinhu. Neimwe nzira, nhoroondo yekubatana neyezvakakura zvinyorwa zvepasi nevanhu.
Kushivirira. MuEast, vanhu vakangwara vanowanzo kuraira vadzidzi vavo kudzidza kushingaira nekuona matombo achikura.
Kusvetuka Matombo Kurota: Rudzi rwekusunungurwa kwehudiki rwunobvumira pfungwa kutenderera. Verenga nhamba yenguva idombo rasvetuka uye funga kukosha kwaro kwenhamba. Kana, tora izvi sechinhu chakareruka kubva kumwana wako wemukati, izvo zvinyoronyoro zvinotiyeuchidza kuti zororo harifanirwe kuenzana nekuva simbe.
( ona Shiri, Nhenga, Mapapiro )
Dzidza zvese nezve Mweya, Totem & Simba Mhuka !
Kutamba kweshuramurove kunomirira kugona kuita chaiko kufamba kunovimbisa kubudirira kwako.
Nekuda kwenyaya dzevana, ichi chiratidzo chekubereka, kunyanya panyama.
Maitiro emadzimai kune vanhu kana akakosha mapurojekiti uye zvinangwa. Shuramurove dzakazvipira kune vechidiki.
( ona Njodzi, Mheni, Mvura, Chando, Mhepo )
Kunetsana kwemukati kana kwekunze.
Emotional buildup inotyisidzira kushatirwa zvakasununguka kana ukasawana nzira inovaka yesimba iro.
Kuburitswa pamoyo kunotungamira kurusununguko (sekuchema kwakanaka), sekungonaya kwemvura nenzira yekufananidzira 'kuburitswa' kubva mumakore kuti ifadze nyika.
Vanyori venhau Dzinorota
( ona Mabhuku, Ngano )
Kuchengetedzwa kwenhoroondo, tsika, chitendero, kana chokwadi chepakati. Pakati pebudiriro zhinji, munhu uyu akaenzana nemadhiard medieval, kana chiHeberu cantor, avo nematarenda avo vaichengeta nhaka yemuromo yeboka rakati riri mupenyu. Mukududzira hope dzakadai, funga kuti ndeipi nyaya inotaurwa, naani uye nani, uye kuti inogamuchirwa sei kune zvimwe zvinoreva. Semuenzaniso, kurambwa kwenyaya yemuBhaibheri kubva paudiki hwako muhope kunogona zvakare kufananidzira kuramba kwako wega pfungwa iyoyo kana maitiro ezvitendero.
Tsika kana zvidzidzo kubva kusingazive kana Yepamusoro Yekuzvimiririra, zvakashongedzwa zvakanaka mune inonakidza kuvaka. Kutaura nyaya kwagara kuri chishandiso chekudzidzisa chinobudirira nekuti chinokwezva kutarisa kwedu kure nebasa rekuti tione sechinhu chinonakidza.
Zvingangodaro, chisikwa chega chinofanirwa kuwana nzira yekuenda mune tepi kana bhuku, kana chete nekuda kwekunakidzwa kwako. Simba rekuvhura rakanyanya kuwanda kana isu takarara, uye mazhinji akanakisa maartist akagamuchira kurudziro yenyaya, rwiyo, kana kupenda nenzira iyi.
Nyaya dzechitendero dzinoratidza shanduko mumaonero kubva pane zvisina kujairika kuenda kuzvinhu zvekunamata, nepo kunzwa zvinhu senge ngano kunoratidzira hunhu hwerudo hunowanzoitika mukufunga.
( ona Boka, Varume, Vakadzi )
Freudian: Kusagutsikana kana kusazivikanwa libido; kudzvinyirirwa manzwiro.
Mamiriro ezvinhu: Funga kumashure kuti uone kana wakasangana nemumwe munhu nguva pfupi yadarika uyo akaita fungidziro yakasimba kukunda pakutanga.
Chikamu chako iwe chaunogara usina kujaira.
Pane mutorwa anotaura chimwe chinhu here? Ichi chingave chiitiko chakakosha, njere, kana mubvunzo wekufungisisa. Vatorwa dzimwe nguva zviri nyore kutaura navo nekuti ivo havana chekubata mumamiriro edu ezvinhu, saka yako subconscious inogona kuzviita pachayo kuburikidza nemifananidzo yakadaro.
Iko kusakwanisa kutaridza wega wakasununguka kana kutendeseka sezvaungade ( ona Choking ).
Kusagutsikana uye kusazadzikiswa nemamiriro ako aripo kusvika padanho apo izvi zvishoma nezvishoma 'zvinouraya' kugona kana kuzvimiririra.
Kukundwa nezvirambidzo zvakaiswa pauri nevamwe, tsika nemagariro, nzanga, kana chitendero.
Kana iwe uchizviona uchikanganisa mumwe munhu, izvi zvinogona kuratidza hukasha kumunhu iyeye, kana chimwe chinhu chakashata mutsika kana mutsika zvekuti iwe unoda kuchimisa.
( ona Kenduru, Ndarama, Moto, Choto, Dzvuku, Tochi )
Hunhu hwechirume. Vamwari vazhinji vekare vaibatanidzwa, kana kumiririrwa sezuva, kusanganisira Apollo kuGirisi naRa muEjipitori ( ona Mifananidzo, Varume ).
Masikati: Kuzara kwekuziva kwekuziva kana kufunga. Unogona kuvimba kuti yako yazvino nzira yekufunga iri 'chaipo' ( ona Nguva ).
Kubuda kwezuva kana Kurara kwezuva: Kutanga kana kupera, zvichiteerana. Chikamu chimwe nechimwe chezuva chinoenzana nezvikamu muhupenyu hwedu, mamiriro, kana hukama, kubuda kwezuva kuri kuzvarwa, uye kunyura kwezuva kunomiririra kufa.
Kuwedzera simba remuviri kana chiitiko chepfungwa.
Chiratidzo chemhanza yakanaka. Tsika zhinji dzakatarisira kuvapo kwezuva panguva dzakakosha sechiratidzo chenyasha dzaMwari nemakomborero.
Iyo egoic, inoziva, yakangwara mamiriro epfungwa dzako, maringe neyakajeka, yekunzwa chikamu, chinova mwedzi ( ona Mwedzi ).
Kupisa Kwezuva: Kuwana nenzira yekufananidzira 'kusvirwa' nemurume, kana kunzwa chigumbu kune vanhuwo zvavo. Neimwe nzira, kunyanyisa kushandisa kwepfungwa inonzwisisika kunokonzeresa kusagadzikana, kunotungamira kunguva dzinotyisa.
Verenga zvese nezve Hutsvene Mucherechedzo uye Zvinoreva Maruva ...
Kuona sunflower inomiririra kupenya kwekudziya kwemweya wako uye nerombo rakanaka. Sunflower inomiririra mweya unokutungamira kunzira yako chaiyo (pamwe yemweya yakapihwa kuti sunflowers maruva anomiririra huvepo hwehunyanzvi hwepfungwa hunyanzvi), uchipa 'chako' chivimbo iwe uchagara uchienderera mberi kumberi mukutarisana nedambudziko. .
Psychic uye Dambudziko Rechiporofita: Maringazuva, dzimwe nguva mameseji ekuti mumwe munhu achakuvhundutsa nekukubvunza kuti usangane navo muchivande. Kuda kuziva kuchakutyaira kuti usangane nemunhu uyu uye iwe uchasiya zvinoshamisa zvinofadza.
Kune rimwe divi, sunflower yaigona kufananidzira kuzvitutumadza. Ive neshuwa yekuona vanhu vavari chaizvo uye kwete vavanoda kuti vaonekwe.
Kumedza Kurota (Shiri)
Kuuya kweshiri iyi muchirimo kunoita kuti ive nhume yetariro nemikana mitsva.
Mukushambadzira, iyo nyengura inomiririra nehanya nebasa.
China: Chiratidzo chekushinga uye kutya. Zvakare mudziviriri akasimba wekuvimbika kwevakaroora.
Biblical (Testamente Yekare): Kutaurirana, dzimwe nguva izvo zvine diki diki. Muchiitiko ichi, iyo nyengura inonzi inongotaura.
( ona Kunyura, Mvura )
Mamiriro ezvinhu aripo auri kusangana nawo ane hwaro husina kusimba izvo zvisingatombotsungirira nekufamba kwenguva. Ongorora zvakare maitiro ako pano, uye uvakezve pane yakasimba sturdier pasi.
Mamiriro ezvinhu akakukomberedza haana kugadzikana uye anovhiringidza, uye zvinoita sekunge paine zvishoma kana paine nzwisiso yekutora. Muchiitiko ichi, kuzvitora kuenda kumvura nyoro zvinokurudzirwa.
Ndangariro dzinenge dzichicherwa kumusoro, kana idzo dzaungade kuviga. Tarisa uone kuti chii chimwe chiri mukati uye chakatenderedza swamp kuti uwane imwe dudziro nzwisiso pano.
Kuzivikanwa kwekupedzisira uye kupera (semuenzaniso, 'kuimba rwiyo rwenyaya').
Pakati pevaHindu, shiri iyi inochinjaniswa nehanzi, inomiririra kutanga kwekusika uye mweya wehupenyu.
VaCelt vaitora hova seshiri yezuva yaive inobatsira uye inoshandura chimiro. Mukurota, izvi zvinogona kuenderana nekugona kwako kujairana nemamiriro matsva zvine mutsindo.
Native American: Chiratidzo chekuvimba nekuregerera.
MaSwans anomiririrawo zvido zverudo, achive anoera kuna Aphrodite, Venus, naZeus, vekupedzisira avo vakazvishandura kuita dhanzi kuteedzera rudo rweLeda.
Kurota kwema swans maviri pamwechete kunoratidzira hukama hwakazvipira. Swans vanobatana kwehupenyu hwese.
Nekuda kwenyaya yeiyo Ugly Duckling, swans zvakare inomiririra shanduko yakanaka mune yako-mufananidzo. Inogona zvakare kuratidza kupedza nguva uine zvisirizvo mapoka evanhu vanopa kuzvidzora kwakaderera.
Pea inotapira Kurota
Kungofanana nezita remadunhurirwa rinodikanwa raizoreva, zviroto nezve ruva rinotapira pizi zvinomiririra rudo rwechokwadi nekudziya.
Kurota ruva iri kazhinji kunofanotaura kuti hukama hune rudo uye hwakareba huchawanda pakati pako nemunhu waunotarisira zvakanyanya. Usamanikidze chero chinhu asi ramba uchiita kuti zvese zviuye zvisina simba kune imi vaviri, kuvimba neruzivo rwainofanirwa kuve.
Kuve neakawedzeredzwa-mweya pane imwe nyaya. Iyo chaiyo nzvimbo yekuzvimba ichajekesa ichi chiroto kumberi.
Zvipingamupinyi-zvekutanga zvinodzora kufambira mberi kupi zvako kwaunotarisira kuita.
Chero chinhu chinobuda mukutonga, kunyanya izvo zvinhu zvinokonzereswa nehupfu hwepfungwa sekushatirwa, kuvava, uye godo.
Chinhu kana mumwe munhu akakutapura panyama, mupfungwa, kana mumweya, kubva pauri kutanga kuona mhedzisiro yakaipa uye mhedzisiro.
( ona Mitambo, Mvura )
Mvura inomiririra hunhu hunonzwisisika uye kusaziva. Iko kufamba kuburikidza neiyi mvura kunoratidza kungave kuda kuyambuka zvikamu zvakavanzika zvemunhu, kana kutarisa pane chakatsanangurwa chimiro chekusaziva sechinangwa chekushambira kwako.
Kubudirira mumamiriro ezvinhu umo iwe wakabvunzwa zvinobudirira kuti 'unyure kana kushambira.'
Kudzora kwechikadzi zvinhu zvega zvekuti hunhu kana manzwiro haakunde kufunga.
Chiyero pakati pezvemweya nezvepasirese, kusendamira zvishoma pazvinhu zvemweya zvinoenderana neuwandu hwemuviri unoratidzwa sekunyudzwa.
Mvura inofananidzira kusaziva. Dzidza nezve iyo Element Yemvura saka unogona kunyatsonzwisisa izvo zviroto zvako zviri kuedza kukuudza iwe.
( ona banga, Zvombo )
Jung akanzwa kuti izvi zvinomiririra iyo inoziva ego inotsvaga rusununguko uye kusasana, yakaparadzaniswa nenzvimbo yemunhu yekwatangira kana boka repakati.
Chishandiso chinogona kubatsira kana kukuvadza. Kungofanana nebakatwa Excalibur raigona kukuvadza kana kuchengetedza nyika yakasimba, minondo inomiririra zvinhu zvese zvatiinazvo-matarenda, ruzivo, zviwanikwa-izvo isu tine basa rekushandisa zvine hungwaru.
Kutaura chokwadi. Zvombo zvakarongedzwa zvinocheka kuburikidza nekunyengera muhope dzedu kusvika pamoyo wechero mamiriro ezvinhu, kunyangwe izvo zvinhu zvatinozvinyengera.
Feudal Japan: Chiratidzo chemweya wevarwi. Iyo Katana ipfumo refu rinomiririra mweya wesamurai uye kuda, nepo Wagasahi yaive ipfupi uye kuita kwekuremekedza nekudzivirira.
Zvinoremekedzwa kurwira chikonzero chakarurama, kazhinji kutora chinzvimbo chehutungamiriri muhondo iyoyo (semuenzaniso, 'kutora munondo'). Cherekedza kuti madzimambo aishandisa pfumo kupa knighthood, uye makwande panguva dzose aipika mhiko paminondo.
Chiratidzo chemurume uye imwe nzira phallus. MuEuropean yechipegani, mapakatwa aive evarume, uye aiwanzovigwa nawo, nepo vakadzi vaibata imba neminda.
Kutyora kana kuisa pfumo zvisirizvo kunoratidza kurasikirwa kwesimba kana hunyanzvi hwemhare, kana kudonha kubva panzvimbo inokudzwa mumaziso evaya vaunoremekedza.
Chiratidzo chekare cheMambo Mutsvene, icho chingaenzana nehunhu hwako hwechirume kana hunhu hwaMwari hwenyika yese ( ona Varume ).
Mu Vachishandisa , Iyo Sutu yeMapakatwa inogona kuve mucherechedzo wedambudziko nekukonana.
( ona Fairy )
leo murume uye leo mukadzi ari pamubhedha
aries murume uye mukadzi wechinyavada
cancer murume uye scorpio mukadzi hushamwari
capricorn murume uye pisces kuenderana kwevakadzi